ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - ရှန်ဟိုင်း Joysun Machinery & လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ, Ltd. Co. , ထုတ်လုပ်ခြင်း
Rotary Vane ဖုန်စုပ် Pump
ပလပ်စတစ် Extrusion စက်
အဖျော်ယမကာ Pack Machinery
ရှန်ဟိုင်း Joysun Machinery & လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd မှထုတ်လုပ်ခြင်း
ရှန်ဟိုင်း Joysun Machinery & လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , ထုတ်လုပ်ခြင်း, Ltd ရှန်ဟိုင်း Joysun Group မှမှ subordinated, ရှန်ဟိုင်းအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်း Pudong နယူးဧရိယာ, အရှေ့ Zhangjiang Hi-Tech မှစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဥယျာဉ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အခက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသည်ပဲ့ဖြစ်ပါသည်စဉ် Joysun ထမ်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလှေကြောင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းယုံကြည်ကြသည်။ 1995 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ကတည်းကအားလုံး Joysun ထမ်း, ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ယန္တရားများနှင့်အဖျော်ယမကာထုပ်ပိုးစက်ယန္တရားဘဝအဖြစ်အရေးကြီးသောအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့များနှင့်သုတေသနများနှင့်လေဟာနယ်စုပ်စက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျိန် ဆို. ပူဇော်ကြသည်။ သူတို့က, အရှင်အဖြစ်ကောင်းစွာအရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာဖရိက, အာရှ, အမေရိကနှင့်ဥရောပ၌ဖောက်သည်များအနေဖြင့်တစ်လောကလုံးကိုခြီးမှမျးအနိုင်ရတဲ့, ကြီးသောစောင့်ရှောက်မှု, တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတိုင်းထုတ်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Joysun ထမ်းလည်း Self-ကျေနပ်နောက်ပြန်ကြောင်းကိုငါသိ၏နှင့်ခြောစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်အားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်ကုန်၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။
ရှန်ဟိုင်း၏ပထဝီသာလွန်နှင့်၎င်း၏လူများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူ Joysun ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်၎င်း၏တီထွင်မှုကိုရပ်တန့်ဘယ်တော့မှမည်!
လိပ်စာ အမှတ် 385 Kaiqing လမ်း, Pudong နယူးခရိုင်, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ် + 86-21-68915100
အသားပေးထုတ်ကုန်များ, မြေပုံအညွှန်း , မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
အလိုအလျောက် Beverage ဖြစက်, Carbonated Beverage Production Line, လူမီနီယမ်သတ္တုဖုန်စုပ် Pack စက်, လေဟာနယ် Pack စက်,